Caalamka Online » Maxay tahay Ujeedada Ka dambaysa In Trump uu Qudus Israil u aqoonsado in ay utahay Caasimad
Maxay tahay Ujeedada Ka dambaysa In Trump uu Qudus Israil u aqoonsado in ay utahay Caasimad
December 8, 2017 - Written by Khaliif - Edited byKhaliif
Waxaa sii xoogaysaya marba marka ka si dambayso Cambaaraynta Siyaasadda cusub ee Trump waxaa ka dhalatay caro ballaaran oo ka timi dunida Carabta iyo Islaamka.
Dhulka barakeysan ee Qudus, ayaa waxaa lagu tijaabin doonaan dalalka Caarabta iyo Islaamka,waxa ayna taas la macno noqonaysaa in hoggaamiyayaasha aysan qaadi karin wax talaabo ah maadaama mar hore laka jabiyay, hadane iyaga is cunayaan.
Dalalka Urdun iyo Sacuudiga oo isu arka in ay yihiin ilaalada dhulka barakeysan ee Islaamka ayaa soo saaray digniin ah in arrintan ay hurin doonto Dunida Islaamka.
Waxa ay Carabta Fahmi waayeen Ujeedada kacdoonkii Carabta ee sababay in hoos udhac balaaran ku yimaado dalalka Carabta, walibaahaa kuwoodii ugu Awooda Badnaa xiligaas, taas oo sababtay in Falastiin qadiyadeeda meesha ka baxdo loona weecday arrimaha Iraan iyo dhibaatada dalalka Khaliijka ee hada ka taagan.
Haddii dalalka Carabta iyo kuwa Islaamka ay qeylada sii wadaan ayagoo wax talaabo ah qaadin, waxaa guul gaari doonta tijaabadan cusub ee lagu sameeyay dalaka Islaamka, Noqon doontaa in aysan dunidaba ka jirin wax la yiraahdo Dowlad Islaam ah oo quwad leh, xitaa fikr iyo siyaasad la aqoonsan yahay leh.